नारायणगढ–मुग्लिन सडक चार दिन बन्द नहुने – mero sathi tv
On ३० पुष २०७४, आईतवार ०७:०१
मुग्लिन सडकखण्ड हिजो शनिबारदेखि चार दिन बन्द नहुने भएको छ ।
रातिको समयमा ६ घण्टा गाडी रोकेर सडक चौडा पार्ने काम चलिरहेको उक्त सडकखण्ड शनिबारदेखि चार दिन खुला रहने नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाले जनाएको छ ।
शनिबारदेखि यहाँ सडकमा करिब ३० प्रतिशत सवारी चाप बढेको उनले जानकारी दिए । जसका कारण शनिबार दिनभर नै यातायात प्रभावित भएको थियो । जोखिम कम भए पनि सवारीको चाप बढ्दा प्रहरीलाई यातायात व्यवस्थापनमा मुस्किल परिरहेको छ । गाडी बिग्रने, ओभरटेक गर्ने र निर्माण कार्यले कतैकतै एकतर्फी सडक चल्दा जाम बढ्ने गरेको छ ।
लोकप्रिय नायक नाजिर हुसैनले गरे प्रेमिका सार्वजनिक, घर एउटै गाउँमा र एउटै स्कुलमा पढ्थे ! कस्ती छिन उनकी प्रेमिका ? (हेर्नुहोस भिडियो)